WhatsApp oo Soo Kordhisay Adeeg Cusub oo aad Kula Socon Karto Caruurtaada, Qoyskaaga Iyo Saaxiibadaa – Goobjoog News
WhatsApp oo Soo Kordhisay Adeeg Cusub oo aad Kula Socon Karto Caruurtaada, Qoyskaaga Iyo Saaxiibadaa
Shirkadda “WhatsApp” ayaa ku dhawaaqday iney soo deysay adeeg cusub oo in muddo ah ay sugayeen dadka macaamiisha u ah, waa adeegga la socoshada halka saaxiibada ay ku sugan yihiin ilbiriqsi kasta, kaas oo si heersare ah loogu ogaanayo halka ay joogaan.
Adeeggan cusub ayaa lagu magacaabaa Live Locations, dadka adeegsada waxa uu u ogolaanayaa inay kula wadaagaan halka ay joogaan isla wakhtigaas sida dhabta ah, adeeggan ayaa hadda si toos ah hawada ugu jira oo laga heli karaa mobillada adeegsada IOS iyo Android.
Adeeggan ayaa ka duwan kii hore barta looga isticmaali jiray, maadaama aad la socon karto qofka aad dooneyso ilbiriqsi kasta halka uu joogana aad ka ogaaneyso.
Adeeggan ayaa laga dhex heli karaa gudaha “Share Live Location” ee WhatsApp, adigoo kala xulanaya inta aad dooneyso qofkaa inaad dhaqdhaqaaqiisa la socoto rubuc-saac, saacad, 8saacadood oo intaa ay si wanaagsan uu kuugu sheegaya halka uu joogo qofka aad dooneyso inaad xaaladdiisa la socoto.
Sidaas oo kale dadbadan ayay kuu suurtogaleysaa inaad ogaato halka ay joogaan oo markaliya ayaad wada arki karto. Adigoo xilli kasta oo aad dooneyso iska joojin kara la socodka qofka.
shirkaddu waxay sheegaysaa in jadwalka lasocoshada aaney cid kale eegan karin oo uu ku kooban yahay oo qura dadka iyagu si gaar ah iskula socoda, sidaa darteed adeeggan ayaa aabayaashu uga faa’idysan karaan iney ubadkooda iyo xubnaha qoyskooda kula socdaan oo ay ku ogaadaan halka ay ku sugan yihiin ilbiriqsi kasta.
Itoobiya Oo Farmaajo U Ballan-qaaday Ka Qeyb-galka Dagaalka Ka Dhanka Ah Al-shabaab
Wax Badan Ka Ogow Qorshaha Qoyska(Family Planning)